लिक बन्यो अइले, रेल गुडाउने कैले ? | Hulaki Online
लिक बन्यो अइले, रेल गुडाउने कैले ?
मुलुकभित्र रेलमार्ग तयार भए पनि गुडाउने रेल नहुँदा स्वदेशमै रेल चढ्ने नेपालीको चाहना पूरा हुन अझै समय लाग्ने भएको छ। भारतको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्मको रेलमार्ग आगामी फागुनमा तयार हुँदैछ । सो ट्र्याकमा सञ्चालन गर्ने रेल भने तयार भएको छैन।
जयनगरबाट सुरु भएर जनकपुर हुँदै बर्दिबास पुग्ने ६९.२ किलोमिटरमध्ये ३५ किलोमिटरमा फागुनदेखि रेल चलाउने योजना रेल विभागको छ । उक्त खण्डको धनुषा कुर्थासम्म ३५ किलोमिटरमा फागुनदेखि रेल चलाउन सकिने विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । ‘फागुनसम्म उक्त ट्र्याक पूर्णरुपमा सम्पन्न हुँदैछ,’ उपाध्यायले भने, ‘ट्र्याकमात्र तयार भएर भएन, चलाउन रेल हामीसँग छैन ।’
मुलुकमा विभिन्न रेल मार्गको विषय उठिरहेको भए पनि हाल यी दुई ट्र्याकको गरी ८८ किलोमिटरको काम भइरहेको छ। निर्माणाधीन यी ट्र्याकबाहेक पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, सात सहरलाई भारतसँग जोड्ने रेलमार्ग, काठमाडौंमा मोनोरेल, चीनबाट रसुवागढी हुँदै आउने रेलमार्ग पनि चर्चामा छन्। भदौ-२८, २०७४